नगरपालिकाले १६ लाखमै भवन बनायो, संसदीय विकास कोषले २० लाखमा आधा मात्रै! « News24 : Premium News Channel
नगरपालिकाले १६ लाखमै भवन बनायो, संसदीय विकास कोषले २० लाखमा आधा मात्रै!
रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर – २ असनवामा रहेको आधारभूत विद्यालयको प्राङ्गणमा नवनिर्मित भवन नै जीर्ण बनेको छ ।
भवनको आधा भागको निर्माण सम्पन्न भइसकेको भए पनि अर्को आधा भाग पिल्लर र छत ढलान गरेर मात्र छाडिएको छ ।
हेर्दा एउटै भवनजस्ताे देखिए पनि त्यहाँ दुइवटा भवन रहेको छ । उक्त भवनहरु निर्माण गर्न बजेट पनि अलग–अलग निकायबाट आएको हो ।
निर्माय सम्पन्न भएको भवन चन्द्रपुर नगरपालिकाको बजेटबाट र करिब आधा निर्माण बाँकी रहेको भवन भने रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनामार्फत ससंद विकास कोषको बजेटबाट आएको हो।
अचम्मको कुरा के छ भने नगरपालिकाको १६ लाख बजेटबाट निर्माण गरिएको २ कोठे भवन निर्माण सम्पन्न भएर रंगरोगन पनि भइसकेको छ । तर संसद विकास कोषको २० लाख खर्च हुँदा पनि साेही अनुपातकाे भवन निर्माण पूरा हुन सकेन । भवनको बनावट र प्रकृतिमा भने कुनै फरक छैन ।
काम रोकिने डरले स्थानीयकाे विरोध राेकियाे
नगरपालिकाको १६ लाख वजेटमा भवन निमार्ण सम्पन्न हुने तर संसदिय विकास कोषको २० लाख वजेटमा भने आधा अधुरै भएपछि स्थानीयले आश्चार्य व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले संसदिय विकास कोषको रकममा अनियमिता भएको आशंका गर्नसमेत थालेका छन् ।
नगरपालिकाको भन्दाबढी बजेट भएपनि कामभने किन आधामात्र भयो भनेर स्थानीयले प्रश्न गरेका छन् । नगरपालिकाले छुट्टाएको बजेट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिम्मा लिएर काम सम्पन्न गरेको थियो हो । त्यस्तै संसदिय विकास कोषको बजेट भने ठेकेदारलाई ठेक्का दिइएको थियो।
सुरुमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै बजेटले विद्यालय प्राङ्गणको छुट्टाछुट्टै स्थानमा भवन निमार्ण गर्ने योजना बनेपनि जमिनको अभाव र विद्यार्थीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै एकै ठाउँमा जोडेर बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नगरपालिकाको बजेटबाट भवनको आधा हिस्सा र संसदीय विकास कोषको बजेटबाट ठेकेदारले आधा हिस्सा निमार्ण सुरु गरेको थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिम्मा लिएर निमार्ण गरेको हिस्सा बने १६ लाखमै पुर्ण भयो भने ठेकेदारले जिम्मा पाएको हिस्सा भने संसदीय विकास कोषको २० लाख सकिँदा पनि आधा मात्र काम सकिएको छ ।
आफुहरुले संसदिय विकास कोषको वजेटमा अनियमिता भएको भनेर सुरुदेखिनै विरोध गरेको तर विरोध गर्दा काम रोकिने भनेपछि आफुहरु पछि हटेको स्थानीयले बताए । स्थानीयले भवनको निर्माणमा अनियमिताबारे छानविन समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
कमिसनको लोभमा उपभोक्ता समितिलाई कामको जिम्मा नदिएर ठेकेदार मार्फत गरिएकोले विद्यार्थी र समुदायलाई घाटा परेको स्थानीयको भनाइ छ ।
चन्द्रपुर २ का वडा अध्यक्ष दुत्तबहादुर थिङले पनि धेरै बजेटले सोही अनुसारको काम हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै आश्चार्य आश्चार्य मान्छन् ।
नगरपालिकाको बजेटको रकमले संसदिय विकास कोषका बजेटले निमार्ण भएको भागको जग निमार्णको काममा पनि सहयोग गरेको उनले सुनाए ।
सांसद र इन्जिनियरको आरोप-प्रत्यारोप
बजेट निकासी गर्ने सांसद तिमल्सिना भने आफुले उपभोक्ता समिति मार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्दाभन्दै नगरपालिका इन्जिनियर भरतप्रसाद श्रीवास्तवले जबरजस्ती ठेक्का निकालेको आरोप लगाए । उनले भवन अधुरो रहेकोमा आफुलाई पनि दुःख लागेको बताएका छन्।
‘मैले उपभोक्ता समिति मार्फत गरौँ भनेर धेरै भनेँ ।तर इन्जिनियर साहेब मान्नुभएन। उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका मेरा अन्य योजनाहरुमा कति प्रभावकारी भएको छ। यो मात्रै अधुरो रह्यो,’ उनले भने।
उनले भवनको विषयमा चिन्तित बनेको बताउँदै उक्त अधुरो भवन पुरा गर्नको लागि जसरी पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
यता इन्जिनियर श्रीवास्तव भने सासंद तिमल्सिनालेनै भनेर ठेक्का निकालेको बताउँछन् । उनले संसद विकास कोषको १ करोड रकम बराबरको बजेटको काम ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने भएपनि विभिन्न प्याकेजमार्फत काम गराएको आरोप लगाए ।
उपभोक्ता समिति भन्दा ठेकेदार मार्फत काम गर्दा केही बढी खर्च लाग्ने बताउँदै भवन निमार्णमा कुनै अनियमिता नभएको उनको दावी छ ।
‘उपभोक्ता समिति मार्फत गर्दा सिधै खर्च हुन्छ । सम्पूर्ण बजेटको काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्काद्धारा काम गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट काटिन्छ, ठेकेदारको नाफा प्रतिशत छुट्याइन्छ। त्यसैले मंहगो पर्न जान्छ।’
उक्त विद्यालयमा रहेको एउटा भवन वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको थियो । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवनमै हाल कक्षा संचालन भइरहेको छ । सो नयाँ भवन बनेपछि जोखिमयुक्त भवनमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरु नयाँ भवनमा सार्ने आफुहरुको योजना अधुरै रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टिका बहादुर कार्कीले बताए ।
तारा आचार्य विराटनगर । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनको
एजेन्सी । अमेरिका र रुसबीचको तनाव पुनः बढ्दै गएको छ । यी ठूला शक्तिशाली मुलुहरुबीच